अधिवेशन हुन्छ, कुरा मिल्छ –सुवेदी - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
हामी प्रवासमा छौं, प्रवासमा रहदा नेपालका दलहरु निकट संस्था खासमा किन चाहियो, अनि तपाईको विचारमा जनसम्पर्क समिति चाही खासमा के हो ?
पक्कैपनि हामी प्रवासमा छौं । जन्मभुमी नेपाल रहेपनि हामी कर्मको लागि देश वाहिर छौं । तर हामी जहा भएपनि पहिला नेपाली हौं । हाम्रो सम्बन्ध नेपालसग जिवन्त रहेको हुन्छ । हाम्रो सम्बन्ध जव नेपालसग रहन्छ, तव हाम्रो सम्बन्ध नेपालको समग्र क्षेत्रसग रहन जरुरी छ । त्यसमा पनि राजनितिक क्षेत्रसग पनि हामी जोडिनु आवश्यक म देख्दछु । नेपालको विकास र समृद्दि चाहने हामीहरुले आफ्नो ठाउवाट पनि सकेको गर्नुपर्दछ, राजनितिक दलहरु सग जोडिएर आफ्ना रायहरु राख्ने अवसर हामीले पाउछौं भन्ने मलाई लाग्छ । रह्यो कुरा जनसम्पर्क समितिको यो संस्था निकैं गौरव बोकेको संस्था हो । विपिले भारतवाट स्थापना गर्नुभएको यो संस्थाको अमेरिकामा पनि गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । अमेरिकामा नेपालीहरुविच यो संस्था ठूलो संस्थाको रुपमा चिनिएको छ । हामीले यहा अन्य सबैं संघ संस्थाहरुसग मिलेर काम गरिरहेका छौं, सबैंबीच एकता गरेर अघि बढेका छौं ।
सबैंसग मिलेर काम गरिरहेका छौं भन्नुहुन्छ, आफ्नै संस्था भित्र चाहि एकता किन हुन नसकेको नि ?
होइन एकता नभएको भन्दा पनि यसलाई केही विवाद छ भनेर बुझौं । अहिले मात्र होइन पहिला पनि विवाद थियो । त्यतिखेर त झन् २ वटा समिति थियो । त्यो समयमा सबैंलाई मिलाएर अधिवेशन गर्न पार्टी(नेपाली कांग्रेस) ले मलाई जिम्मा दियो । टेक्ससमा मैले नै एकताको अधिवेशन गरेको हु । त्यो अधिवेशनले बनाएको नया समितिको पदावधी गएको नोमेम्वरमा सकिएको हो । नोमेम्वरमा अधिवेशन भैसक्नुपर्ने थियो, भएको छैन, त्यो अधिवेशन छिटो होस् भन्ने हामीले चाहेका हौं, चुनाव होस् र सबैं प्रक्रियाबाट अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
उसो भए अधिवेशन नभएरैं विवाद भएको हो त ?
कुनैं पनि संस्था विधि संगत ढंगले अघि बढ्दा विवाद कम हुन्छ । जव विधि मानिदैंन वा मिचिन्छ अनि समस्या देखिन्छ । अहिले केन्द्रीय समितिको पदावधि समाप्त छ, च्याप्टरहरुको पनि पदावधि सकिएको अवस्था छ, यो अवस्थामा स्वभाविक ढंगले साथीहरुले चुनाव होस् भनेर चाहना राख्नुलाई म त्यसलाई जायज मान्छु । हामीले अधिवेशन चाहेका छौं, यो नहुदा साथीहरुमा समेत जागर मरेको छ । अधिवेशन नहुदा त्यो रुपवाट काम समेत हुन सकेको छैन । साथीहरुमा वाद विवाद, शंका उपशंका, गुट उपगुट जस्तो देखिएको छ । यो अवस्था धेरैं जानु हुदैंन । केन्द्र(नेपाली कांग्रेस) ले निकास दिनुपर्ने हुन्छ, विवादहरु हट्नुपर्दछ । मलाई विश्वास छ अधिवेशन पछि स्वत: यो समस्याको हल हुन्छ ।
तपाई पार्टीले केही गरोस् भन्नुहुन्छ पार्टी नेताकैं व्यक्तिगत सम्बन्धले समस्या बल्झिएको भन्नेहरु पनि छन् नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
पार्टीले गर्ने निर्णय र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई एक ठाउमा राखेर सोच्नु सही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पार्टीले गर्ने निर्णयमा नेताहरुको पर्सनल सम्वन्धले खासै असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अझ हाम्रो जनसम्पर्क समितिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो आफ्नै विधान रहेको छ । हामी हाम्रैं विधानमा टेकेर अघि बढ्ने हो । र विधान विपरित काम गर्न कसैलाई कसैको प्रेसर आएको मलाई थाहा छैन, र आउदा पनि आउदैंन भन्ने मलाई विश्वास छ । हामीले समयमै गरेको भए आज केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन । वर्तमान समितिले सक्षमता नदेखाउदा र गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । यो समितिले समयमै काम गरेको भए आज यसरी पत्र कुर्नुपर्ने थिएन, यो समितिकै कारणले केन्द्रले पनि बढी सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्था आएको हो, नेता ज्यू हरुलाई पनि केही असजिलो बनाएको हो कि भन्ने लाग्छ, मुख्य कुरा अधिवेशन नहुनुनैं हो ।
यो समितिको पदावधि सकियो भन्नुहुन्छ, त्यसो भए उहाहरुको पद चाहि कायम छ भन्नुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ ? अनि पार्टीले आनन्द विष्ट जी लाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ ? यसलाई चाहि कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो समितिको कार्यकाल सकिएको छ । त्यसैले स्वत: यो समितिका सवैं पदाधिकारीहरुको कार्यकाल पनि सकिएको म ठान्दछु । तर केन्द्रले केही कामकाज नगर्न भनी अहिलेकैं सभापति ज्यूलाई पत्र पठाएको छ, यसले केही द्धिविधा त छ तर पनि काम नगर्न भन्नुको अर्थ वैधानिकता छैन भन्न खोजिएको हो । यसलाई धेरैं विवादको विषय बनाउनु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो पक्षमा पनि म छैन ।
रह्यो कुरा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको यो एकदम खुशीको कुरा हो । पहिला भारतवाट मात्र थियो अहिले उहालाई पनि आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ यसलाई हामी सबैंले खुशीकै रुपमा लिएका छौं । यो पनि कामको मुल्याकंनको आधारमा गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने मात्र हो ।
उसो भए केन्द्रले निकास निकाल्छ भन्ने हो ?
हो यो गर्नैपर्दछ, यहाको सबैं कुरा सभापति, वरिष्ठ नेता, महामन्त्री र अन्य नेताहरु सबैंलाई जानकारी छ । सबैंलाई यहाको वस्तुस्थिति थाहा छ । त्यसैंले नैं कुनैपनि कुरा अगाडि नवढाउन भनी निर्वतमान सभापतिलाई चिठ्ठी आएको हो । मलाई लाग्छ अवको केही दिनमा सबैंलाई समेटेर अधिवेशन तयारी समिति पार्टीले बनाएर पठाउछ । सबैंलाई मिलाएर चुनाव गराउन सक्ने गरी संयोजक चयन गरेर समिति बन्छ, र त्यो समितिले ६ महिनादेखि देखि १ बर्ष भित्र चुनाव गराएर नया नेतृत्व निर्माण गर्छ, अनि प्रक्रियामा समिति अगाडि बढ्दछ । केन्द्रले यो समस्याको समाधान चाडैं निकाल्नेछ मलाई विश्वास छ ।
अनि संयोजक चाहि कसले लिने ?
संयोजक चाही केन्द्रले कसलाई विश्वास गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । सबैंलाई मिलाएर अधिवेशन गराउन सक्ने पात्र केन्द्रले खोज्छ । उसको संयोजकत्वमा सबैंलाई समेटेर केन्द्रले तयारी समिति बनाउछ ।
संयोजकमा आनन्द जी आउनुभयो भने नी ?
यो पार्टीको कुरा हो । उहालाई दिने भए त्यो व्यहोराको पत्र आउने थिएन, त्यस्तै जिम्मेवारी सहीतको पत्र आउने थियो । त्यही पनि आनन्दजीले स्टेप चढिसक्नुभयो, सायद माथि चढ्नुभएको उहाले अधिवेशन गराउछु भन्दैं संयोजकको पद खोज्नुपनि हुन्न होला र खोज्नुभएको छैन होला । मलाई लाग्छ कोही माथि चढेपछि ब्याक हुनुहुदैंन । त्यसैले तयारी समितिको संयोजकको दौडमा उहा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
समस्या देखियो, तपाई पनि जनसम्पर्कको नेता समाधान खोज्न पहल किन लिनुभएन ?
मैले आफ्नो ठाउवाट सक्ने गरेको हु । अधिवेशनको समय नजिक आएको छ । भर्जिनियामा साधारण सभा नगरौं, च्याप्टरको चुनावमा जाऊ भनेको थिए, आनन्द जी लाई उहाले मान्नुभएन । अमेरिका जस्तो ठाउमा एकै वर्ष दुइ वटा साधारण सभा र अधिवेशन गर्न गाह्रो पर्छ भनेको थिए, कुरैं सुन्नुभएन । अधिवेशन पनि गर्छु भन्नुभयो, नेताहरुलाई पनि यो बारे अवगत गराएको थिए । उहाले अधिवेशन पनि गर्छु भनेपछि नेताहरुले पनि विश्वास गर्नुभयो । तर अधिवेशनको केही सुरसार देखाउनुभएन, कुरा मात्रै गर्नुभयो, कामगर्ने कुरा देखिएन, विस्तारैं थाहा भयो कि उहाको यो खाली पदको समयावधि बढाउने कुरा मात्र हो ।
तपाई उहाहरुको कार्यकाल सकियो भन्नुहुन्छ तर उहाहरु त अझैं त्यही पदमा नैं रहेर सक्रिय हुनुहुन्छ त ?
विधानत: नोमेम्वर २२ मा उहाहरुको पदावधि सकियो । अव त पार्टीले पनि भनिसक्यो । पत्रका अनुसार त उहा सभापति त हुनुहुन्छ, तर केही नगर्नु भनेपछि उहाले वुझ्नुपर्ने हो, पार्टीलाई सजिलो बनाइदिनुपर्ने हो । उहा अव पूर्व सभापतिको ठाउमा आउनुभयो, मेरो ठाउमा नैं आउनुभयो । मलाई लाग्छ उहाले त्यस्तो नगर्दा राम्रो हुन्थे, अव त स्टेप अप हुनुभयो उहालाई सजिलो पनि भयो । यदि आनन्द जी को ठाउमा म भएको भए मैले अरुलाई दिन्थे, सेकेण्ड म्यान वरिष्ठ उपसभापतिलाई दिन्थे, अनि वाहिर निस्कन्थे, गर्ने परम्परा पनि यही नैं थियो ।
अधिवेशन भएपनि समुह त सक्रिय नै होला नि होइन, लाइन त यहा पनि छ ?
हैन मत नेपालको नैं लाइन अहिले अस्पष्ट देख्छु । अझ एकदमै नेपालको जस्तो २ धारमा हामी यहा कोही छैनौं, धार बनेर जान्छ भन्ने पनि छैन, र त्यसरी जानु पनि हुदैंन, म त यसलाई क्वान्टिटीको भन्दा क्वालिटीको संस्था बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्छु । यो भनेको कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो । कांग्रेसलाई माया गर्नेहरुको संस्था हो । यसमा भिड जम्मा गर्ने पक्षमा म चाहि छैन । र नेपालका नेताहरुले पनि यहा त्यसरी समुह बनाउनु होला भन्ने मलाई लाग्दैंन । र त्यसो गर्दा नेताहरुको पनि कुनैं स्वार्थपूर्ति हुदैंन । यहा उहाहरुले मिलेको जनसम्पर्क समिति चाहनुभएको छ । त्यसैले दुई धारमा हामी यहा कोही छैनौं ।
धार छैन भन्नुहुन्छ, समुह त च्याप्टर पिच्छे नै छ त ?
डेमोक्रेसी मान्नेभएपछि इलेक्सन मान्नुपर्दछ । इलेक्सनमा गएपछि एउटैं पदमा धेरैं उठ्ने कुरा रहन्छ । त्यसका लागि समुह वन्न सक्छ । म यसलाई डेमोक्रेसीमा सकारात्मक हिसावले नै लिन्छु । चुनावमा जादा समुह बन्छ तर त्यो समुह चुनाव पछि पनि सक्रिय हुने कि नहुने भन्ने हो यसमा जित्नेको भुमिका अहं हुन्छ । सबैंलाई समेटेर लाने गरी नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्दछ । अहिले त्यही यहा नहुदा समस्या भएको हो । नेतृत्वमा जितको घमण्ड हुदा संस्था कमजोर हुन्छ सर सल्लाह सबैंको लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । अवको नेतृत्व जो आएपनि यो वाटोमा हिडोस् र हिड्नुपर्दछ भन्ने हो ।
(जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका पूर्व संयोजक विष्णु सुवेदीसग सुरज भण्डारीले गर्नुभएको कुराकानी )